Izinkinga Zamaseva weLinux Mint | Kusuka kuLinux
Izinkinga zeseva ye-Linux Mint
Ku I-Linux Mint blog Bebelokhu bebuyekeza isimo samanje samaseva abo, ngemuva kokuba inkinga yokuvumelanisa yenzekile kubo okuholele ekulahlekelweni kwedatha kuzibuyekezo zezinqolobane.
Njengamanje indawo yokugcina iyasebenza, kepha ihamba kancane kakhulu futhi kwesinye isikhathi iyaphahlazeka ngenxa yenani elikhulu labasebenzisi ababuyekeza i- UP4 ngalesi sikhathi. Ukuvumelanisa phakathi kweseva nezibuko kumile, ngakho-ke kwenziwa umzamo wokulungiselela iseva yokuvuselela isimo esiphuthumayo ukubhekana nethrafikhi yamanje. Abafana be Mint bacela abasebenzisi babo ukuthi bahlehlise ukuvuselelwa izinsuku ezimbalwa, futhi uma uhlangabezana nezinkinga, zizwe ukhululekile ukuxhumana negumbi Ingxoxo ye-IRC (irc.spotchat.org, # debian-linuxmint).
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Ukusatshalaliswa » Izinkinga zeseva ye-Linux Mint
Imininingwane ewusizo kakhulu kungaba kuhle uma ngisebenzisa i-LMDE kepha manje sengiku-Debian emsulwa.
Futhi yingakho manje ngiku-linux chakra 😛
aahahaha .. awungitshele nge-chakra ..
uma i-debian / ubuntu / mint isebenzisa i-sudo apt-get esebenzisa i-chakra?
Ngifaka kanjani i-jdowloader ne-sublime text2 ku-chakra?
Awukwazanga ukuthi uphenye kangcono?
cha! ngoba akufani ukufunda .. komunye umuntu angitshele ngesipiliyoni sakhe
sebenzisa kangcono ama-emac 😛
Impela… anginaso isabelomali seMac Pro 🙂 .. Oh angikwazi ukuthola ukuthi ngiyifaka kanjani i-Lion OS kwi-PC yedeskithophu.
Ama-Emacs angumndeni wabahleli bombhalo, abonwa ngu
ukwelula kwabo. Okuningi ku-Wikipedia ...
U-Chakra usebenzisa i-pacman njengomphathi wephakeji ne-KDE4 njenge-DE.
Kulula ukwenza i-live-usb (i-hybrid ISO) ngomyalo we-ddrescue noma umyalo we-dd (ku-athikili bathi kanjani).
Manje yini i-chakra eyi-Arch Linux kodwa ake sithi iza nayo yonke into cishe eyenziwe?
Cha, ekuqaleni yebo kepha uChakra usevele uhlukanisiwe ne-Arch.
Ziqondiswe ezintweni ezahlukahlukene
I-Chakra GNU / Linux ukusatshalaliswa kwe-Linux ekuqaleni kususelwa ku-Arch Linux futhi kugxile kwisoftware yakamuva ye KDE.
Okuningi ku-Wikipedia | Isiza esisemthethweni: chakra-project.org
njengoba isithombe singaveli, lesi isixhumanisi senjini yokusesha ...
Ngafaka ingwe yeqhwa, ngemuva kokusesha ngafunda ukuthi ifakiwe uma une-processor ye-Intel, ngo-amd akunakwenzeka.
Ukuphela kwesikhathi lapho ngazama khona iMint kimi nganginebhadi lokuthi amaseva aphahlazekile futhi ayikwazanga ukuqeda into kahle. Kusukela lapho ngayibeka eceleni. Manje nginoXubuntu futhi ngenza kahle. Ngangizamile iMint ngoba Ubunye abuzange budlule. Futhi, ikhompyutha yami ayisona isizukulwane sakamuva futhi anginayo imali yokuthenga enye. Uma uMark enginika ngizosebenzisa Ubumbano.
Kodwa-ke, emsebenzini wami wevangeli, ngafaka iMint kuwo wonke umndeni futhi bawuthanda. Ngaleso sikhathi amaseva ayesebenza futhi ajabule.
Hambisa ukwahlukaniswa kwezimpande kwenye idiski
Imibono yomuntu siqu mayelana ne-LMDE Update Packs 5, 6 no-7